Wasiir Goodax"Masar kama Taliso Muqdisho Iskuulka 15 may Waxaa Ka Mas,uul ah Somaliya" -
HomeWararkaWasiir Goodax”Masar kama Taliso Muqdisho Iskuulka 15 may Waxaa Ka Mas,uul ah Somaliya”
Wasiir Goodax”Masar kama Taliso Muqdisho Iskuulka 15 may Waxaa Ka Mas,uul ah Somaliya”
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay ujeedka ay Wasaaradda ula wareegeyso Iskuulka 15 May oo ay maamulayeen Guddiga waxbarashada reer Masar, iyadoo ardayda dhiganeysay Iskuulka ay si lacag la’aan ah wax ku baran jireen
Dugsiga 15 May ayaa tan iyo sanadkii 2015 waxaa gacanta ku hayay Guddiga Waxbarashada reer Masar, iyadoo Iskuulkan manhajka laga dhigayay uu ahaa manhajka waxbarashada dalka Masar oo ah waxbasradaha Hoose iyo dhexe.
“Waan arkaayay baraha bulshada iyo baraha internet-ka arrimaha Soomaalida ka hadlo xildhibaanno ka hadlaayo, aniga xildhibaannadaas, xildhibaanno siyaasadda ka dhacay oo dowladnimada iyo wadaniyadooda ay aad u hoosayso ayaan aaminsanahay inay yihiin”. ayuu yiri C/llaahi Goodax Barre.
Mr Goodax ayaa sheegay in go’aanka Iskuulkaas ay ula wareegaan uu yahay mid ay ugu daneynayaan sidii howlahooda ugu qabsan lahaayeen.
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay Guddiga waxbarashada Masar ee gacanta ku haya Iskuulka 15 May ay ku wargelisay inay la wareegayaan iskuulkaas, loona bedelayo Machadka waxbarashada gabdhaha wax ka dhigi doona Iskuulada Hoose iyo dhexe.
Go’aankan dowladda soo saartay ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo ay soo baxday in dowladda Federaalka ay ka laabatay taageeradii qaraarkii Masar horgeysay shirka jaamacadda carabka ee ku saabsanaa arrinta wabiga Niil oo lagu cambaareynayay tallaabooyinka dowladda Itoobiya ku xoojineysay qorshaheeda biyo xireenka ay sameysatay.